Myanmar Fire Services Dept. | MFSD
EMERGENCY: 191 myanmar.fsd@gmail.com
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ အင်ကြင်းကန်ကျေးရွာအနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်း၊ ရထားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် (၂၆၇/၂၀)နှင့်(၁၆၇/၂၁) အကြား ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
Myanmar Fire Services Department
HOME SAFTELY CHECK
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀)၊ ပဒေသာမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကားကြီးကွင်းလမ်းတွင် မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Jan 8, 2019 | Uncategorized, မီးလောင်မှု, သတင်း
(၆.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ၁၈ ၃၀ အချိန်တွင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀)၊ ပဒေသာမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကားကြီးကွင်းလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(ဍ/၃)တွင် လျှပ်စစ်မီးအပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ၁၈ ၃၂...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၀၉/၅)နှင့် (၁၀၉/၆)အကြားတွင် မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Jan 8, 2019 | မီးလောင်မှု, သတင်း
(၆.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ၁၇ ၀၀အချိန်တွင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၀၉/၅)နှင့် (၁၀၉/၆)အကြားတွင် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့မောင်းနှင်လာသော IPSUM (ခဲရောင်)ယာဉ်သည် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ လင်းမြွေချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လင်းမြွေချောင်းကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၆.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ၁၅ ၄၀ အချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ လင်းမြွေချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လင်းမြွေချောင်းကျေးရှိ (၁၅×၁၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းနေအိမ်တွင် ဂတ်စ်မီးခြစ်ဖြင့်ဆော့ကစားရာမှ နေအိမ်အဖီထန်းလက်မိုးအား...
« First« Prev...89101112...203040...Next »Last »
The Central Fire Station
Sule Pagoda Rd, Yangon, Myanmar (Burma)
+95 1 254 000
North Dagon Township Fire station
North Dagon Township Fire department, Yangon, Myanmar
+95 1 584 060
Monywa Fire station
Dhammayon St, Monywa, Myanmar (Burma)
Naypyitaw Fire station
Aung Nan Mingalar Road, Naypyitaw, Myanmar (Burma)
Pyinmana Fire station
Bo Gyoke Road, Pyinmana, Myanmar (Burma)
Taunggyi Fire station
Taunggyi, Myanmar (Burma)
+959264 160 871
Myeik Fire Station
Myeik, Myanmar (Burma)
Katha Fire Station
Katha, Myanmar (Burma)
Copyright © MSFD. 2018 All Right Reserved. Powered by Forever Web Studio.